အန်ဖီးလ် ကို လာရောက် ကစားဖို့ ယုံကြည့်ချက်က အမြင့်ဆုံးမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အင်ဇာဂီ - xyznews.co
အန်ဖီးလ် ကို လာရောက် ကစားဖို့ ယုံကြည့်ချက်က အမြင့်ဆုံးမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အင်ဇာဂီ
မေး – ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်းမှာ ပထမ အကျော့ 2-0 ရလာဒ် ကနေ ပြောင်းပြန် လှန်ပစ်နိုင်ခဲ့တာ တစ်သင်းပဲ ပေါ်ပေါက်ဖူးတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယ အကျော့ကစားပြီး နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်နိုင်ဖို့ အတွက် ဘယ်လောက်အထိ မျှော်လင့်ထားလဲ။
ဖြေ – ပထမ အကျော့ ရလာဒ်က တော်တော်လေးကို ပြင်းထန်လွန်းပါတယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော့် အသင်း ကစားပုံက တကယ်ကို ကောင်းခဲ့တာပါ။ အန်ဖီးလ်လို နေရာမျိုးမှာ ဥရောပ ရဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်းတွေထဲက တစ်သင်းနဲ့ ကစားရမှာမို့ အရမ်းကို ခက်ခဲပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ရဲ့ ယုံကြည်မှု က အမြင့်ဆုံးထိ ရှိနေပါတယ်။
မေး – အဝေးကွင်း ဂိုး စည်းမျဉ်းမရှိဘူး ဆိုတော့ Game Plan ကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားလဲ ၊ သွင်းဂိုး ကို အမြန်ဆုံး ရနိုင်သမျှ ရအောင် ကြိုးစားသွားမှာလား?
ဖြေ – ကျနော် တို့က ပွဲကို အောက်သက်ကနေ စတင်ရမှာပါ။ ပထမပိုင်းမှာ ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းထားနိုင်ရင်တော့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပွဲက အရမ်းကို ခက်ခဲမှာပါ။ ကျနော့်မှာ သုံးရက် ပြင်ဆင်ချိန် ရှိပါတယ်။ ကစားသမားတွေ ကလဲ အာရုံ အပြည့် စိုက်ထားသလို ၊ ပရိသတ်တွေက ဘယ်လို မျှော်လင့်ထားလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်ထားပါတယ်။ လီဗာပူး ဟာ ဥရောပ ရဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်းတွေထဲက တစ်သင်း ဖြစ်နေလို့ သူတို့ အိမ်ကွင်းမှာ ပိုပြီးတော့တောင် ခက်ခဲ သွားနိုင်ပါတယ်။
မေး – ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ဖို့ တော်တော်လေးကို ခက်ခဲနေပါပြီ ၊ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲက အင်တာ မီလန် ရဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ရပ်တည်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ထုတ်မယ့် ပွဲမျိုးလို့ မြင်မိလား?
ဖြေ – အင်တာ မီလန် ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိတာ နှစ်တွေ တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာတော့ အုပ်စုကျပ် ထဲ ရောက်ခဲ့တာတောင် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေ ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဆင့်ချင်း တိုးတက်အောင် လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ ပထမ အကျော့တုန်းကလဲ အကောင်းဆုံး ကစားပြနိုင်ခဲ့သလို ၊ သူတို့ ကွင်းထဲမှာလဲ အလားတူ ကစားပြနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ပြိုင်ဘက် အကြောင်း သိထားပြီးသား ဆိုတော့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာမှာပါ။ ချန်ပီယံလိဂ် ဒီလို အဆင့်မျိုးမှာ ကစားခွင့်ရတာ ဘောလုံးသမားတွေ အတွက်လဲ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံ အခွင့်အရေးမျိုးပါ။
မေး – Salernitana ကို ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူပြထားလို့ ယုံကြည်ချက်တွေ ပြန်ပြီး ခိုင်မာသွားပြီလား။
ဖြေ – သောကြာနေ့တုန်းက ပွဲက အခက်ခဲတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလာဒ်မျိုး ရအောင် အလှည့်အပြောင်းတွေ လုပ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ရှုထောင့် ကနေ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒီလို နိုင်ပွဲမျိုးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ လီဗာပူး နဲ့ ပွဲအတွက် အခု အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
မေး – ပါရီဆစ် ရဲ့ အခြေအနေလေး ပြောပြပါဦး။
ဖြေ – ပွဲပယ် ခံထားရတဲ့ ဘာရယ်လာ က လွဲရင် ကျန်တဲ့ ကစားသမားတွေ အားလုံး ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကိုလာရော့ဗ် ကတော့ ကျနော်တို့ ရဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ကစားသမား စာရင်းမှာ ပါဝင်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
Previous Article ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ ဆော်ဒီ မီဒီယာ အင်အားစု
Next Article အာဆင်နယ် အသင်းဖော်ဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လူငယ် ကြယ်ပွင့် တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ပါတေး